Magetsi Chitima - Jiangsu Runau Electronics Kugadzira Co, Ltd.
Yakakwira Simba Retaidha uye Thyristor muMagetsi Chitima
Kugadzirisa chitima chemagetsi: seyese chikamu-DC chitima chemagetsi, ndiyo inonyanya kushandiswa AC chitima chemagetsi. Pane iyo rectifier yemagetsi chitima, iyo imwechete-chikamu yakakwira-voltage AC pane yekubatana network inodonhedzwa pasi ne traction transformer pakutanga, uye ipapo imwe-chikamu AC inoshandurwa kuita DC neyakagadzirisa mudziyo unoumbwa nesilicon inogadzirisa chinhu kana thyristor , Uye yakapihwa mota yekudonha. Ita danho rekutonga pane rinogadzirisa kuti uchinje iyo yakagadziriswa magetsi kuitira kuti uchinje chinomhanya chitima.
Chikamu-chimwe chikamu chemotokari mota yemagetsi chitima: inozivikanwawo seakananga AC yemagetsi chitima, imwechete-chikamu commutator traction mota inoiswa. Iyo yepamusoro-voltage AC simba pane yekubata network ichave inoderedza iyo voltage neiyo transformer, yozozopihwa kune yekuidhonza mota yakananga.
AC-DC-AC chitima chemagetsi: inozivikanwawo seye-chikamu-chetatu-chikamu magetsi chitima. Iyo yepamusoro-voltage AC simba pane yekubatana network inotanga kudzika pasi uye kugadziriswa ne traction transformer, yakadai kuchengetedza iyo DC voltage kana DC yazvino yepakati DC chinongedzo chakatsiga. Zvadaro, inverter redunhu inoshandura iyo yepakati DC simba kuita matatu-chikamu AC simba uye rinopa iro kune matatu-chikamu asynchronous traction mota kana iyo-nhanhatu-nhanho inowirirana traction mota. Simba rekubuda uye nekumhanyisa kwechitima zvinogona kugadziridzwa nekugadzirisa kuwanda uye magetsi ezvikamu zvitatu-zvinoteedzana zvazvino nerudzi rwe inverter.
Rectifier chishandiso muchimisheni chinotsiva: shandura simba remagetsi rinotakurwa kubva kumutsara wesimba rekufambisa kuenda mumagetsi emagetsi, yakaderera frequency imwechete-chikamu uye simba frequency matatu-chikamu AC simba, ndokuparadzirwa kune inoenderana netiweki yekubatana.